AMBOHIBARY SAMBAINA : Jiolahy iray tra-tehaky ny fokonolona, niharan’ny fitsaram-bahoaka
Nisahotaka vao maraina ny mponina tao an-tampon-tanànan’Ambohibary Sambaina, noho ny fahatratrarana lehilahy iray manodidina ny 20 taona izay voalaza fa nandroba fivarotana lehibe tao an-toerana, omaly talata maraina. 16 mai 2019
Saika hanatanteraka fitsaram-bahoaka ity farany ireo mponina raha toa ka saron’ny fokonolona teo am-pisotroana labiera tao amin’ny fivarotana iray no sady nila ady tamin’ny tompon’ny tsena ihany koa raha ny tatitra voaray. Nolazain’ity tovolahy fa ananany trosa mitentina iray tapitrisa ariary ilay fivarotana nisotroany zava-pisotro mahamamo tamin’io fotoana io. Raikitra ny fifamaliana nony avy eo ary vory lanona ny mponina nijery ny zava-niseho. Tamin’izay fotoana izay no nisy fokonolona nahatsikaritra fa io lehilahy io no tompon’antoka tamin’ny fandrobana fivarotana lehibe iray teo an-tanàna.
Avy hatrany dia nidaroka sy saika hamono ho faty azy avokoa ny vatan-dehilahy rehetra ary tsy afa-nitsoaka intsony ity farany rehefa voahodidina olona marobe. Nalaky tonga namaha ny olana haingana ireo Polisy miisa telo lahy, nampitony ny mponina sy nisambotra ity voalaza ho nahavanon-doza. Rehefa natao moa ny fisavana dia nahitana karatra maha mpikambana “kung-fu” tany aminy ary isan’ny mponina efa ela teo an-tanàna ihany koa. Raha ny fitarainana nataon’ireo mponina dia nanamafy fa jiolahy raindahiny ny lehilahy ka nangataka ny mpitandro filaminana mba tsy hamotsotra azy intsony. Mitohy hatrany kosa ny famotorana lalina ny tranga ary efa niverina amin’ny laoniny ny filaminana.